Madagascar PRSP Malagasy par kai yeo - Fichier PDF
Madagascar PRSP Malagasy .pdf
Nom original: Madagascar_PRSP_Malagasy.pdfTitre: 02 SectionOne FA (M)Auteur: kai yeo
Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFTools - www.docu-track.com / PDF-XChange (xcpro30.dll v3.40.0086) (Windows XP), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 23/03/2012 à 09:37, depuis l'adresse IP 41.204.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2392 fois.
Taille du document: 5.5 Mo (112 pages).
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 1
Ny Vision « Madagasikara Voajanahary »
Ny MAP no manangana fotokarena ho an’ny firenena
Ny Tanjona Lehibe
Ny MAP sy ny Tanjon’ny Fampandrosoana amin’ny
Taona Arivo Fahatelo
Ny Soatoavina hitarika ny MAP
Ny tombontsoa amin’ny fananana ny MAP
Ny laharam-pahamehan’ny MAP
Ny olona : Fototra iorenan’ny fanatanterahana ny MAP
Rafitra vaovao atsangana hitondra dingana lehibe
Rafitry ny fampiharana ny MAP
Ireo Teny Valo Ifanomezana
Teny Ifanomezana 1 : Fitantanana tomponandraikitra
Teny Ifanomezana 2 : Fotodrafitrasa mifandray
Teny Ifanomezana 3 : Fanovana ny fanabeazana
Teny Ifanomezana 4 : Fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra
Teny Ifanomezana 5 : Fahasalamana, fandridrampiterahana
ary ady amin’ny VIH/SIDA
Teny Ifanomezana 6 : Fitomboana lehibe eo amin’ny toekarena
Teny Ifanomezana 7 : Tontolo Iainana
Teny Ifanomezana 8 : Firaisankinampirenena
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 2
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 3
MAP › Madagasikara Am-Perinasa
HAFATRY NY FILOHAM-PIRENENA
Ry Fianakaviambe iraisaisam-pirenena,
Efa nisafidy ny lalan’ny fanovàna i Madagasikara. Hatramin’ny
taona 2002 dia nametraka ny fototra ahafahan’ny Firenentsika
miroso amin’ny fampandrosoana haingana sy maharitra isika.
Nofaritantsika tamin’ny Novambra 2004 ny Vision
Madagasikara Voajanahary (Madagascar Naturellement),
novolavolaina sy notanterahina ny fandaharanasa isankarazany hanomezana vahana ny fampandrosoana.
Mba hanafainganana sy handrindràna ny asa fampandrosoana,
ary koa mba hahatanterahintsika ny dingana lehibe sady tsara
mankany amin’ny fanatsaràna ny toe-karena dia namolavola
ny Madagasikara Am-Perinasa na MAP isika ny volana Oktobra
2006. Drafitr’asa goavana sy matotra ny MAP ary manoritra
ny soridalana sy ny laharam-pahamehana ho an’ny Firenena
ao anatin’ny dimy taona, 2007 hatramin’ny 2011.
Voasoritra ao anaty MAP ny toky nomena, ny paikady sy ny
asa hotanterahina mitondra mankany amin’ny fisondrotan’ny
harinkarena haingana, mipaka any amin’ny fampihenana
ny fahantrana, ary ahafahan’ny Firenena misintona
tombontsoa avy amin’ireo fanambin’ny fanatontoloana
(défis de la mondialisation), ka mifanaraka sy mifandraika
amin’ny Vision “Madagasikara Voajanahary” sy ny Tanjon’ny
Fampandrosoana amin’ny Taona Arivo Fahatelo (Objectifs
du Millénaire pour le Développement).
Miantso anareo aho hifarimbona ampahavitrihana
hanatanteraka ny MAP. Samy manana ny andraikitra tandrify
azy ny tsirairay satria lehibe ny asa miandry. Hitondra
tombontsoa goavana manomboka any amin’ny tanàna kely
indrindra ka hatrany amin’ny tanàn-dehibe eto Madagasikara
ny fampandrosoana haingana vokatry ny MAP.
Ho antsika mpiasam-bahoaka, fanamby ho antsika ny hiezaka
hanatevina ny fahaiza-manao ara-pomba mba hahafahana
manome fahafahampo ny Vahoaka amin’ny alalan’ny asa,
asa tsara, asa mafy, sy hahafahantsika mampiasa amin’ny
fomba ahitam-bokatra ireo fanampiana rehetra avy any
ivelany. Izany no hiteraka valin-kasasarana mendrika ny
ezaka vitantsika. Ka manome toky aho fa tonga ny fotoana
ankehitriny hijerena manokana ny mpiasam-bahoaka. Isika
mpiasam-panjakana izay antsointsika hoe “Mpiasambahoaka”, no loharanon’asa voalohany, hanaporofo vokatra
tsara ho an’ny governemanta sy ny Vahoaka iray manontolo.
Tena takian’ny Firenena tokoa ny fahavononantsika, ny
fahasahiantsika, ny fahitsintsika ary ny fahamendrehantsika.
hanatsarana ny fotodrafitrasa, ny fanabeazana, ny
fahasalamana, indrindra ny ezaka amin’ny fandrindrana
ny fiainam-pianakaviana sy ny ady amin’ny VIH/SIDA,
ary ny fiharian’ny Tantsaha. Zava-dehibe loatra ny
fifampatokisana ka dia hotohizantsika hatrany izany.
Ho antsika mpandraharaha, eo amin’ny seha-pamokarana
tsy miankina, isika no ivon’ny fahatratrarana ny tanjon’ny
MAP. Efa nifanome teny hanana toekarena sy fihariana heniky
ny fitomboana isika ahafahana manao ilay dingana lehibe
sady tsara no mahomby eo amin’ny fampandrosoana. Tokony
hampiroborobo ny mpandraharaha eto an-toerana isika
hisandrahaka amin’ireo sampan’ny toekarena rehetra mba
hampitombo haingana ny famoronan’asa.
Tokony hahay hisintona ny mpampiasa vola vahiny isika
ho an’ny fampandrosoana. Tonga ny fotoana hanohanana
ny seha-pamokarana tsy miankina, hivelarany haingana,
hampitomboany sy hanatsarany ny vokatra, ahafahan’ny
mpandraharaha manondrana entana sy miatrika ny
fifaninanana eo amin’ny tsenam-paritra sy ny tsena iraisampirenena. Ny fampitomboana ny fampiasam-bola no fototry
ny politikantsika ahafahana mamorona asa, manome
fanofanana, ary manatsara ny fari-piainan’ny Vahoaka Malagasy.
Ho anareo mpiara-miombon’antoka aminay eo amin’ny
sehatry ny fampandrosoana, sy ny fianakaviambe iraisampirenena ary ianareo mpamatsy vola, efa nandray anjara
lehibe tokoa ianareo teo amin’ny fampandrosoana an’i
Madagasikara. Misaotra anareo aho amin’ny anaran’ny
Vahoaka Malagasy. Fa mbola misaotra betsaka anareo
mialoha koa aho amin’ny fanampiana lehibe izay ho
ataonareo amin’ny fanatanterahana ny MAP, hanamafy
ny fiaraha-miasa hanatevenanareo ny enti-manana mba
Amin’ny maha Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ahy,
izay nitarika ny famolavolana ny MAP, dia manome toky aho
fa hanao araka izay tratry ny heriko hanatanteraka antsakany
sy andavany ny MAP mba hitondra fampandrosoana haingana
sy maharitra ho an’i Madagasikara.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 4
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 5
NY VISION: “MADAGASIKARA VOAJANAHARY”
Ho lasa firenena miroborobo i
Madagasikara. Hanana toekarena
misondrotra haingana isika ary hahita
fahombiazana amin’ny fifaninanana eo
anivon’ny tsena iraisam-pirenena.
Hokolokolointsika sy ho arovantsika
ny tontolo iainana, ary ho ampiasaintsika
am-pahamendrehana sy amin’ny
fandraisana andraikitra mba ho antoky
ny fampandrosoana. Ny fototry ny
fampandrosoana dia hiainga avy amin’ny
fananantsika harena voajanahary miavaka
sy ny fanodinana ireo vokatra voajanahary.
Ho salama sy hahazo fampianarana ny
vahoaka Malagasy na ny any ambanivohitra
na ny any an-tanan-dehibe. Ho mpandray
anjara mavitrika eo amin’ny fizotry ny
fampandrosoana ny rehetra ary samy
hahazo tombontsoa amin’ny asa atao avy
na eo anivon’ny fambolena sy fiompiana,
na eo anivon’ny taozava-baventy, na eo
anivon’ny fandraharahana matihanina.
Amin’ny maha-firenena iray, dia homentsika
lanja manokana ny fananantsika
kolontsaina sy fomba nenti-paharazana
maro samihafa. Hirehareha amin’ny
maha-Malagasy antsika isika, hitambatra
ho iray ao anatin’ny firaisankinam-pirenana,
ary hiasa hiaraka mba hanatrarana ny
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 6
Ny fotokarena maha olona:
Ny fotokarena fotodrafitrasa:
Ny fotokarena maha olona dia ahitana
ny sampan-draharahan’ny fahasalamana,
ny fanohanana ara-tsakafo, ny fampianarana
ary ny fanofanana izay afahan’ny tsirairay
mamokatra amin’ny lafiny ekonomika
Ny fotokarena fotodrafitrasa dia ny
lalana, ny famatsiana jiro sy rano, ny
fitandroam-pahasalamana, ny seranampiaramanidina sy seranan-tsambo,ny
lalamby ary ny fifandraisan-davitra izay
tena manampy ny mpandraharaha, ny
governemanta ary ny Vahoaka amin’ny
asa aman-draharaha sahaniny.
Ny fotokarena sehatra tsy
Ny fotokarena sehatra tsy miankina dia
ny milina, ny trano, ny fitanterana, ny
famokarana, ny paikady, ary ny rafitra
araky ny lalàna ilain’ny mpandraharaha
hahafahany mifaninana eo amin’ny tsena
Ny fotokarena voajanahary:
Ny fotokarena voajanahary dia ny tany azo
volena, ny tany mahavokatra, ny harena araboajanahary, ary ny firaisan-tontolo iainana
mirindra tsara izay ilain’ny firenentsika
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 7
Ny fotokarena fitarihana:
Ny fotokarena fahalalana:
Ny fotokarena andrim-panjakana:
Ny fotokarena fitarihana dia ny fahaizana
mitantan-draharaha sy mitondra olona, ilaina
manerana ny firenena hitondrana fiovana,
hitarihina ho any amin’ny fampandrosoana,
ary hanamorana ny fahazoana sy ny fikajiana
ireo fotokarena hafa.
Ny fotokarena fahalalana dia ny fahaizamanao siantifika sy teknolojika izay
mampitombo ny fahavokarana eo amin’ny
sehatry ny fandraharahana sy ny
governemanta ary mampivelatra ny
famoronana sy ny fifaninanana.
Ny fotokarena andrim-panjakana dia
ny fitantanana ao anatin’ny fandraisana
andraikitra ary ny fanohanan’ny mpiasampanjakana ny firenena. Ilaina izany amin’ny
fampiarana ny politikam-panjakana sy ny
fanomezana sampan-draharaha mahomby
sy mahafa-po, mamaly ny hetahetan’ny
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 8
Tondron’ny Fandrosoana Mahaolona
Faha 146 amin’ny 177
3 hatramin’ny 4
58 hatramin’ny 61 taona
Tahan’ny fitombon’ny toekarena
7 % hatramin’ny 10%
Harikarena Faobe (Tapitrisa USD)
Harikarena isan’olona (USD)
Fampiasam-bola Mivantana avy any Ivelany
Tondro fahatsapana ny Kolikoly
Tahan’ny mponina manana taratasin-tany
(ampahan’ny mponina miaina amin’ny latsaky ny
2 USD isan’andro)
(isan’ny zaza teraka isan-dreniny)
Tahan’ny mponina mahay mamaky teny sy manoratra
Tahan’ny ankizy mahavita ny fianarana
Ireo paikady sy tetikasa
ao anatin’ny MAP dia
hanao izay hanatrarana
ny fampihenana ny
fahantrana sy ny
fanatsarana ny fiainan’ny
Malagasy rehetra tsy
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 9
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 10
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 11
NY MAP SY NY TANJON’NY FAMPANDROSOANA AMIN’NY TAONA ARIVO FAHATELO
1. Ny famongorana ny fahantrana mihatra
amin’ny aina sy ny hanoanana:
Hahena ho antsasany ny tahan’ny mponina eto ambonin’ny
tany izay miaina amin’ny latsaky ny 1USD isan’andro
hatramin’ny 2015, hahena ho antsasany ny tahan’ny
mponina eto ambonin’ny aina iharan’ny hanohanana.
2. Ny fampidirana amin’ny sekoly
ambaratonga voalohany ny zaza rehetra
hatramin’ny taona 2015
Hahatozo hatramin’ny farany ao amin’ny sekoly
ambaratonga voalohany ny zaza rehetra hatramin’ny
3. Ny fampitoviana zo ny lehilahy sy ny
vehivavy ary omena lanja sy sehatra
mivelatra kokoa ny vehivavy
Foanana ny fanavahana ny zazalahy sy zazavavy
any amin’ny ambaratongam-pianarana rehetra
hatramin’ny taona 2015.
4. Ny fampihenana roa am-pahatelony ny
Hahena roa am-pahatelony ny fahafatesan’ny zaza
5. Ny fanatsarana ny fahasalaman’ny reny
Hahena ho antsasany ny tahan’ny fahafatesan’ny reny
6. Ny ady amin’ny SIDA, ny tazo ary ny
Fehezina ny fihanaky ny aretina ary atomboka
ampidinina ny isan’ny marary hatramin’ny 2015.
7. Ny fiantohana ny faharetan’ny tontolo
Ampiharina ny paikady momba ny fampandrosoana
maharitra sy ny fiarovana ny harena voajanahary.
Hahena ho antsasany ny tahan’ny mponina tsy manana
rano fisotro madio sy foto-drafitr’asa ara-pahasalamana
8. Ny fampiroboroboana ny fiaraha-mientana
iraisam-pirenena ho amin’ny
Sokafana ny tsenam-bokatra sy ny rafitra ara-bola
iraisam-pirenena, ampiharina ny fanafoanana ny trosa,
ifantohana ny fanomezana asa ny tanora, anaovana ezaka
ny fahafahana manana fanafody amin’ny vidiny mirary,
ary ampiana ny fahazahoana miditra amin’ny haitao
manaraka ny toetr’andro.
Hiaraka hiasa isika mba
hanatrarana ny Tanjon’ny
taona Arivo fahatelo.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 12
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 13
Samy mahatsapa isika fa ny
ny MAP dia miankina amin’ny
Hiarahantsika rehetra izany,
indrindra eo amin’ny
Ny maha-matihanina amin’izay rehetra ato
Isika rehetra dia tokony miezaka manatratra ny faritra sy
sehatra tsara indrindra misy ny matihanina.
Ny fitarihana dia tokony ho hita taratra mazava amin’ny
ambaratonga rehetra eo amin’ny asam-panjakana sy ny
sehatra hafa rehetra eo amin’ny fiaraha-monina.
Ny mpitarika dia tokony hampiseho fandraisana andraikitra ka
hanentana ny olona sy ny enti-manana rehetra mba hanatrarana
ny tanjona voafaritra ao anatin’ny Vision sy ny MAP.
Fandraisana anjara sy fiaraha-miasa
Tokony hampiroboroboina ny foto-pisainana fiaraha-miasa
amin’ny rehetra, na any amin’ny faritra, na amin’ny kaominina
na eo anivon’ny mpiray ombon’antoka iraisam-pirenena.
Fampiasana ny enti-manana efa misy ho
Ialana ny fampiasana kitoatoa ka atao izay hahazoana ny
vokatra ambony indrindra avy amin’ny enti-manana misy eo
Mba hahita fahombiazana eo amin’ny fifaninanana eo
anivon’ny faritra, ny firenena, ary ny sehatra iraisam-pirenena
dia tsy maintsy manana tanjaka manokana sy avo lenta ny
sehatry ny fampianarana, ny sehatry ny asam-panjakana, ary
ny seha-pamokarana tsy miankina.
Fitazonana ny fahamarinana
Ny fitazonana ny fahamarinana, ny fahamendrehana ary ny
fifampatokisana no ahafahan’ny mpiasam-panjakana
mamokatra ho an’ny vahoaka.
Finiavana hitozo hatramin’ny farany
Fanohizana ny fanamafisana ny fahaiza-manao
Tokony hanohy hianatra sy hanamafy hatrany ny talenta sy
ny fahalalana isika mba ho tafita.
Tokony hikiry, haneho fandraisana andraikitra, ary
hanatanteraka ny teny nomena isika.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 14
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 15
Ho an’ny vahoaka Malagasy
Ny MAP no hanamafy ny fanantenana sy ny fahatokiana ny
amin’ny ho avy.
Ho an’ny asam-bahoaka Malagasy
Ny MAP no hanondro ny lalan-kizorana ho an’ny asampanjakana.
Ho an’ny seha-pamokarana tsy miankina sy
ny mpandraharaha eto an-toerana
Ny mpandraharaha tsy miankina amin’ny fanjakana dia
hatoky fa misy tokoa ny fiovana tena hita taratra sy azo
Ho an’ny mpampiasa vola avy any ivelany
Ny mpampiasa vola avy any ivelany dia ho voasarika ary
hatoky ny amin’ny fampiasana ny volany eto Madagasikara.
Ho an’ireo mpiray ombon’antoka iraisampirenena eo amin’ny fampandrosoana
Ireo mpiray ombon’antoka iraisam-pirenena eo amin’ny
fampandrosoana dia hanamafy hatrany ny fahatokisany
an’i Madagasikara ho firenena mahay mampiasa amin’ny
tokony ho izy ny ho enti-manana mba hanatanterahana
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 16
FISANTARANA FANAVAOZANA MAHERY VAIKA
Vonona isika hanatanteraka ny fanomezan-toky ao anatin’ny MAP. Manao ezaka firenena mpamaky lay i Madagasikara hanatanteraka dingana
tsy mbola hita taratra teo anivon’ny firenena an-dalam-pandrosoana. Mba hahatongavana amin’izany tanjona izany dia hampihatra ireto
fanavaozana fototra manaraka ireto isika izay antsoina hoe “fisantarana fanavaozana mahery vaika”. Izany dia asa maika mitaky fandraisana
andraikitra haingana, fitarihana hentitra, fiaraha-miasa eo amin’ny Ministera isan-tsokajiny, ary enti-manana voatokana amin’izany.
Fanavaozana ny fitantanambolam-panjakana
Tsy maintsy ampitomboina ny fampidiran-ketra hahafahana
mamatsy ara-bola ireo tetik’asa voarakitra ao anatin’ny
MAP. Zava-dehibe tokoa izany mba hampihenana ny
fiankinandohantsika amin’ny mpamatsy vola avy any ivelany.
Hatramin’ny taona 2005 dia isan’ny lesoka tsy maintsy ho
Ampitomboina haingana ny fampiasam-bola mba hitondra
fivoarana lehibe eo amin’ny toe-karena. Amin’ny alalan’ny
Economic Development Board of Madagascar, na Filan-kevitry
ny Fampandrosoana ny Toe-karen’i Madagasikara, dia
hamolavola teti-pivoarana hentitra isaky ny sehatra isika mba
hampivelatra haingana ireo sehatra mpanondrana entana sy
ny sehatry ny fizahan-tany: ny famokarana, ny fanodinambokatra, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ary ny
Ankehitriny, eto Madagasikara dia manodidina ny 10 isanjaton’ny hari-karena faobe ny totalin’ny fidiram-bolam-panjakana
avy amin’ny hetra sy ny fadin-tseranana. Ezahina ny hampiakatra
izany ho 15 isan-jato hatramin’ny taona 2012. Mitaky fanovana
goavana izany mikasika ny lalàna mifehy ny fandoavan-ketra
- mba hanamorana azy - sy ny rafitra ary ny fomba fitakianketra - mba hahatonga izany hahomby sy ho ara-drariny.
Amin’ny fiandohan’ny taona 2007, dia hanatontosa fanadihadiana
lalina mikasika ny lalàna mifehy ny fandoavan-ketra isika.
Hanampy antsika amin’izany ny Tahirim-bola Iraisam-pirenana
(Fonds Monetaire International) sy ny Banky Iraisam-pirenana
(Banque Mondiale). Hisy koa ny fiaraha-miasa mavitrika amin’ny
mpandraharaha eo amin’ny seha-pamokarana tsy miankina sy
ny fiaraha-monim-pirenena amin’izany.
Eo anivon’ny Governemanta kosa, dia hisy fandraisana
andraikitra sy fanaraha-maso hentitra momba ny fampiasambolam-panjakana; koa izany dia mitaky fametrahana laharampahamehana ho an’ireo tetik’asa vatsian’ny Governemanta vola,
tetik’asa hampitombo haingana ny toe-karena sy hanamora ny
fanatanterahana programa sosialy goavana.
Hatomboka amin’ny fampahalalana an’izao tontolo izao fa
firenena afaka mifaninana mba hampamokatra ny fampiasambola i Madagasikara. Hataontsika ho laharam-pahamehana ny
fanamboarana ny foto-drafitr’asa hanohanana ny orin’asa fototra.
Hapetraka ny fitsipika sy ny fepetra hanamorana ny fisarihana,
ny fandrosoana, ary ny fivelaran’ny sehatra fototra izay omena
ny tombon-tsoa sahaza azy.
Havaozina ny lalàna momba ny fananan-tany mba hahafahana
mampitombo ny fahatokisan’ny mpandraharaha. Hametraka
lalana mampiseho fahasahiana isika mikasika ny fampiasambola, ary hametraka rafitra mahomby araka ny lalàna mba
ahafahana manaraka sy mampihatra ny fanajana ny
fifanarahana; ho amafisina ny fanelanelanana mikasika ny
fifandirana ara-barotra eo anivon’ny mpandraharaha; ary ho
amafisina ny fiantohana ny fampiasam-bola. Ho apetraka ny
fepetra hamahana ny sakana mba hahafahan’ny mpandraharaha
mampiasa vola an-kahalalahana.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 17
Fanombohana ny dingana maitso lehibe
Fepetra mikasika ny fahasalamana sy ny
Hatomboka ny asa hahatontosana dingana maitso lehibe eto
Madagasikara. Izany dia hikendry ny fampiroboroboana ny
vokatry ny tantsaha mpamokatra ka hahafahana miantoka
fa tsy hisy intsony ny mosary, ka hisy fitomboana lehibe ny
vokatra hamatsiana ny eto an-toerana ary hisy ambim-bava
hahafahana manondrana any ivelany.
Haingana loatra ny fitombon’ny isan’ny mponina eto
Madagasikara. Tokony hahena ny isan’ny zaza ateraka.
Ny faritra sasany eny ambanivohitra dia hahitana zaza fito
hatramin’ny folo isan-tokan-trano. Ho amafisina ny
fanapariahana ny fanabeazan’aizana sy ny toro-hevitra mikasika
izany ahafahana mampihena ny isan’ny zaza ateraka.
Hatramin’ny taona 2005 dia nanafatra vary avy any ivelany
i Madagasikara; ao anatin’ny taona vitsy dia ho lasa
mpanondrana vary sy vokatra hafa i Madagasikara.
Hahafahana manatanteraka ny dingana maitso lehibe,
dia hanao ezaka ny Governemanta hiantoka ny fahazahoan’ny
tantsaha mpamokatra ny masom-boly, ny zezika, ary ny
fiofanana ilaina. Ho apetraka ihany koa ny lamina
hananganana fiaraha-miombon’antoka vaovao hanampy
amin’ny fanangonana sy ny fizarana ny vokatra.
Mamely ny faritra maro eto Madagasikara ny tazo. Hatramin’ny
taona 2005 dia antsasaky ny mponina eto Madagasikara ihany
no voaaro amin’ny alalan’ny fampiasana ny lay fiarovana amin’ny
moka. Efa natomboka ny tetik’asa fiarovana amin’ny tazo ka ao
anatin’ny roa taona dia atao izay hahazahoan’ny Malagasy
tsirairay avy lay fiarovana amin’ny moka.
Fanatsarana ifotony ny fandriam-pahalemana
Ny dahalo eny ambanivohitra dia sakana iray lehibe ho
amin’ny fampandrosoana. Ao koa ny olana goavana mikasika
ny fanondranana antsokosoko vato soa sy hazo ary ny
fanjonoana tsy ara-dalana. Havaozina ifotony ny rafitra sy ny
fomba fiasa mikasika ny fandriam-pahalemana hahatonga
an’i Madagasikara ho firenena milamina sy mandry fehizay,
ahafahan’ny tsirairay mamokatra, mivezivezy, mampiasa vola
ary manao asa aman-draharaha malalaka.
Ny fanambintsika koa dia ny hanao izay hifehezana ny fihanaky
ny VIH – SIDA mba tsy ho lasa toy ireo firenena Afrikana maro
i Madagasikara. Hatramin’ny taona 2005, dia ambanin’ny iray
isan-jaton’ny mponina no mitondra ny otrik’aretina SIDA, raha
mahatratra telo-polo isan-jato izany ao Afrika Atsimo. Efa
napetraka eto Madagasikara ny paik’ady mahomby ao anatin’ny
Politika iadiana amin’ny VIH – SIDA.
Fampivoarana ifotony ny rafi-pitsarana
Hanatanteraka fanovana lehibe isika isika eo amin’ny rafi-pitsarana,
ka ho atomboka izany eo amin’ny sehatry ny fitsarana ara-barotra,
ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny fanomezan-tsazy
ary ny rafitry ny fonja. Izany fepetra izany dia hiteraka fahatokisan’ny
vahoaka sy ny mpandraharaha ny rafitra amin’ny ankapobeny.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 18
NY OLONA: FOTOTRA IORENAN’NY FANATANTERAHANA NY MAP
1. Fampivoarana ny fahaiza-mitarika
Raha jerena ifotony, ny fitarihana dia ny fanentanana ny
daholobe hiatrika ny zava-misy, hamaha olana, hamokatra,
sy hanatratra ny tanjona. Mila mpitarika mahay isika amin’ny
sehatra rehetra – eo anivon’ny governemanta, eo amin’ny
sehatry ny fandraharahana, ny fiangonana, ny sekoly, ary ny
fiarahamonim-pirenena hanao izany asa izany. Noho isika
nozanahana fahiny, nandalo tamin’ny fitondrana sosialista,
ary firenena niankin-doha tamin’ny mpamatsy vola, dia lasa
fahazarana tao an-tsain’ny maro ny miandry olon-kafa hitarika
antsika. Tsy maintsy hovaina izay fomba fijery izay. Mba
hazahoana ny fitarihana ilaintsika, dia ataontsika izay ahitana
sy hanakaramana olona mahay sy mahavita zavatra, ary
omena toerana tompon’andraikitra ambony izy ireny
ahafahany mitarika ny fanavaozana.
Manaraka izany, mba hanohanana ny fanamafisana ny fahaizamitondra dia natsangana eny amin’ny Lapa-panjakana eny
Iavoloha, ny National Leadership Institute of Madagascar. Io
sekoly io dia hanofana ny minisitra, ny sekretera jeneraly, ny
tale jeneraly, ny lehiben’ny faritra, ny lehiben’ny distrika, ary
koa ny mpitarika tanora, ny mpitarika eo amin’ny
fiarahamonim-pirenena, sy ny mpitarika mpandraharaha.
Hanamafy ny sekoly hafa toy ny ENAM sy ny oniversite ihany
koa isika. Ireto avy izany ireo fanamby lehibe momba ny
fitarihana izay hatrehintsika, amin’ny maha governemanta
antsika, sy amin’ny maha firenena antsika:
Ny MAP dia miorina amin’ny
ny vahoaka, ny vahoaka
Malagasy. Ny fanatrarana
ny tanjona dia mitaky
amin’ny fomba mahazatra,
ny foto-pisainana ary ny
sy hanao angaredona
isika mba hahatrarana
ny tanjona iombonana;
mpirahalahy sy mpirahavavy
mianala isika, ny iray
tokin’ny hafa ary ny hafa
tokin’ny iray. Isika rehetra
no fototra ijoroan’ny
fanatanterahana ny MAP.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 19
2. Fanovana ny fomba fijery sy ny fomba fanao
4. Fampitomboana ny fahaiza-manao
Tsy maintsy ovana ny fomba fijery, ny fomba fanao, ary ny
fomba fiasa izay hitondra any amin’ny lalan’ny fahombiazana.
Amin’ny maha mponina antsika, tsy maintsy raisintsika antanana ny fandresena ny tahotra sy ny loza amin’ny
fanatrehantsika izao fotoan’ny fanatontolona izao. Tsy maintsy
afaka manararaotra ireo tombontsoa maro dia maro eran’izao
tontolo izao isika. Mitaky fiovana ny fandrosoana. Marina fa
betsaka ihany koa ny zavatra sarobidy sy mila arovana, eo
amin’ny kolontsain-tsika. Kanefa, misy lafiny maromaro
amin’ny fomban-drazantsika, sy amin’ny finoantsika, no tsy
maintsy hovaina, na foanana. Ny asa“leadership”, na eo
anivon’ny firenena manontolo, na eo anivon’ny toerana iray
manokana dia manamora izany fizorana amin’ny fiovana
izany, amin’ny alalan’ny fihainoana, ny fifanakalozan-kevitra,
ny fandrisihana, ary ny fianarana.
Fahaizana, fahaizana, fahaizana! Mila mampitombo haingana
ny fahaiza-manaony, sy ny teknolojia i Madagasikara, mba
hahatonga azy hahomby ao amin’ny tontolon’ny fifaninanana
sy ny fanatontolona. Tsy ho vita vetivety akory izany, nefa tsy
maintsy manafaingana ny fomba fianarantsika isika. Izao ny
paikadintsika: miantso manapahaizana iraisampirenena isika
mba hampianatra antsika, misarika ny Malagasy any ivelany
mba hiverina aty an-tanindrazana, ary mandefa Malagasy
hanaraka fampianarana, eto an-teorana sy any ivelany.
3. Fiadiana amin’ny kolikoly
Samy leo kolikoly avokoa isika rehetra. Mampiakatra ny vola
lany amin’ny fandraharahana ny kolikoly. Mampiakatra ny
vola lanin’ny governemanta amin’ny fiandraiketandraharahany ny kolikoly. Ho hentitra momba ny endriky ny
kolikoly rehetra ny asa “leadership”, ary tsy hamindra fo na
inona na inona. Raha hentitra isika, tsy maintsy manondrotra
soatoavina mivoatra, na eo anivon’ny governemanta, na eo
anivon’ny fiarahamonina. Ireo izay voarohirohy amin’ny
raharaha kolikoly, na mpiasam-panjakana izy ireo, na
mpandraharaha iraisampirenena, dia manome hasina ny
tombontsoany manokana, manoloana ny tombontsoan’ny
fiarahamonina na ny tombontsoan’ny firenena. Ny mpitondra
dia tsy maintsy manandratra amin’ny fomba mahery vaika
– amin’ny teniny sy amin’ny asa ataony – ny soatoavina sy ny
fomba fiasa manorina ny firaisan-kina nasionaly, ny
fahamarinana, ny fangaraharana ary ny fahombiazana.
5. Fanentanana ny daholo be sy
Mila fanentananana goavana an’izay rehetra ananantsika
isika, mba hanantanterahana ny MAP: ny vola, ny teknika,
ny fitaovana, ny olona. Mitaky fahaiza-mamorona izany,
mitaky fasahiana misandratra, ary mitaky “leadership”. Fara
faha keliny, zavatra telo no fantatsika fa tsy maintsy ataontsika:
1) Tsy maintsy mavitribitrika isika mitady mpamatsy vola
hanampy antsika – tsy ireo mpamatsy vola lehibe indrindra
ihany, fa tokony hitady hatrany mpamatsy vola miroalany
(bilatéral), ary koa ireo fikambanana iraisampirenena;
2) Mikatsaka ny hahavita tena isika, ary tsy hiankin-doha
amin’ny mpamatsy vola intsony. Noho izany tsy maintsy
azontsika antoka fa voatantana amin’ny fomba mahomby
sy mitera-bokatsoa be indrindra ho an’ny firenentsika ny
loharanon-karentsika; ary 3) hanao fanavaozana tanteraka
ny fitsipi-pifehezana sy ny fomba fanao momba ny hetra
mba ahazontsika mampitombo be dia be ny vola miditra
ho an’ny fanjakana, ka afahana mamatsy vola ny
programan’asa sosialy toy ny fahasalamana, ny
fanabeazana, ny fandriampahalemana, ary ny
fampandrosoana ny any ambanivohitra.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 20
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 21
Of Madagascar (NLIM)
Hampiroborobo ny fahaiza-mitarika hitondra
amin’ny dingana lehibe
Ny NLIM dia natsangana tamin’ny taona 2006 mba ho
ivotoerana hanamafisana ny fahaiza-mitarika eo amin’ny
sehatra rehetra dia ny fitantanana ny fanjakana, ny sehapamokarana tsy miankina ary ny fiaraha-monim-pirenena.
Fanofanana avo lenta eran-tany no atolotra mba ahafahan’ny
mpandray anjara ho matihanina, hiasa am-pahamarinana,
hahay hamaha olana, mba hahatrarana ny tanjona.
Of Madagascar (EDBM)
Hampiroborobo ny seha-pamokarana tsy
miankina hitondra amin’ny dingana lehibe
Ny EDBM dia natsangana ny taona 2006 mba hampiroborobo
ny seha-pamokarana tsy miankina na ny eto an-toerana na
ny avy any ivelany. Ny EDBM dia nomena andraikitra mba
hampivoatra ny tontolon’ny fandraharahana eto Madagasikara
mba hisarika ireo mpampiasa vola sy hampahomby ny
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 22
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 23
Ny Vision Madagasikara
Ny Vision Madagasikara Voajanahary sy
ny Tanjona Fampandrosoana ho an’ny
Taona Arivo Fahatelo no mamaritra ny
lalan-kizoran’ny firenena amin’ny
Ny MAP dia politikam-pampandrosoana
mandritra ny dimy taona,
antenatenan’ezaka, mirakitra ireo Teny
Ifanomezana valo hiadiana amin’ny
fahantrana eto amin’ny firenena sy
hanaingana ny dingana lehibe.
Ny Teny Ifanomezana valo sy ny
tanjona ao anatin’ny MAP dia
voarakitra antsipirihany ao anatin’ny
Ny Politika Ankapoben’ny
Fandrindrana ny fiarahamiasa iraisam-pirenena:
Ny Teny Ifanomezana ao anatin’ny
MAP dia ampiharina amin’ny alalan’ny
Politika Ankapoben’ny Fanjakana sy ny
tetibolam-panjakana izay volavolaina
Mba hahatsara sy hahatsapana kokoa
ny vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny
mpiray ombon’antoka avy any ivelany,
dia hisy ny fihaonana isan-taona mba
handrindrana ny asa. Hampitombo ny
fiatraikan’ny asa izany sy hampihena
bebe kokoa ny fahantrana.
Apetraka ny rafitra fanaraha-maso
mba hahafahana manao tomban’ezaka
ny asa vita sy manitsy ny fepetra eny
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 24
Hanana fitondram-panjakana izay
hitokisan’ny olompirenena Malagasy sy
ny fianakaviambe iraisam-pirenena isika.
Ny governemanta sy ny mpiasambahoaka dia hanana fahamarinana, hahay
ny asany, ary ho matihanina tanteraka
amin’ny fanatontosana ny asany.
Ho firenena mifandray isika. Hanorina
làlana manana kalitao avo, sy rafitra
momba ny hairahan’ny fifandraisana
manerana ny firenena isika mba
hahatomombana ny fampandrosoana
haingana, ny fanamoràna ny sehatry
ny fandraharahana sy ny varotra, ny
serasera eo amin’ny tompon-tany sy
ny vahiny, ary mba hanatsaràna ny
fari-piainana, ny fahazoana ny entimanana ary ny fahalalana ankapobeny
ho an’ny rehetra.
avo lenta isika, na eo amin’ny lafiny
kalitao na eo amin’ny fahombiazana.
Izany lamim-pampianarana izany
dia handrisika ny mpianatra ho tia
karokaroka ary hanampy azy
hanatanteraka ny nofinofiny. Amin’izany
i Madagasikara dia hanana ny olona ilainy
hahafahany mifaninana amin’ny firenena
hafa ary hahatonga azy ho mpandray
anjara mahomby eo amin’ny toekarena
Fampandrosoana ny p.63
Ny fampandrosoana haingana sy
mavitrika ary ny fampihenana marina ny
fahantrana no fototra iorenan’ny ezaky
ny governemanta. Handroso ireo faritra
eny ambanivohitra amin’ny alalan’ny
dingana maitso lehibe izay hampivelatra
ny vokatry ny fambolena.
Hatsangana ny ivo-toerana momba
ny fandraharahana ara-pambolena
isaky ny faritra 22 mba hiantohana ny
fanomezana fahafaham-po ny filàna toy
ny fampidiran-drano, ny masomboly,
ary ny trano fitehirizana ny vokatra. Ireo
ivo-toerana ireo no hanome ny fiofanana,
ny fahaiza-manao, ary ny hevitra
rehetra mba hahamafy orina ny sehatry
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 25
fandrindrana ny fiainampianakaviana ary ady
amin’ny VIH / SIDA
Fitomboana lehibe eo p.83
Hatsaraina ny fahasalaman’ny vahoaka
rehetra mba hahafahany mandray
anjara amin’ny famokarana
handrosoan’ny firenena sy hisian’ny
fiainana mitera-bokatsoa. Hovahantsika
miaraka ny olana momba ny tsy
fahampian-tsakafo sy ny tazomoka.
Hanana toekarena mitombo haingana
i Madagasikara ; ny tahan’ny fitombon’ny
harin-karena faobe dia hahatratra fito
ka hatramin’ny folo isan-jato amin’ny
Tsy havela hianaka ny VIH/SIDA.
Hiantohana ny fahazahoana rano
fisotro madio. Hihena ny hamaroan’ny
fianakaviana Malagasy mba hahatsara
Hanana sehatra tsy miankina mivelatra
sy matanjaka koa i Madagasikara.
izay hametrahana fepetra fototra ho
fanamoràna ny fandraharahana. Ho afaka
hiatrika ny fanambin’ny fanontoloana
isika sy hampiasa izany ho amin’ny
tombontsoan’ny vahoaka Malagasy.
Ho lasa lohalaharana eo amin’ny
sehatra iraisam-pirenena i
Madagasikara amin’ny fampan
drosoana sy ny fampiharana ny fahaizamanao mahomby momba ny fiarovana
ny tontolo iainana. Taorian’ny taona maro
nisian’ny fanararaotana sy ny tsirambina
teo amin’ny fitantanana, dia efa
nanomboka nanova ny famindra isika.
Ho lasa « Nosy Maitso » indray isika.
Hiara-mientana isika hikarakara, hitia
ary hiaro ny tontolo iainantsika.
Hotohizantsika ny fiombonana ho
firenena iray, mirehareha amin’ny
fananana ireo kolontsaina sy fomba
amam-panao nenti-paharazana maro
isan-karazany.Handray anjara amin’ny
fiainan’ny fiaraha-monina sy ny firenena
ny tsirairay avy.
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 1
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 2
TENY IFANOMEZANA 8
Hotohizantsika ny fiombonana ho firenena iray, hirehareha amin’ny fananana ireo
kolon-tsaina sy fomba amam-panao nenti-paharazana maro isan-karazany. Handray
anjara ny tsirairay avy amin’ny fiainan’ny fiaraha-monina sy ny firenena.
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 3
MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 8 | FIRAISANKINAM-PIRENENA
FANAMBY 1 ›
MANOME LANJA MANOKANA NY FAHASAMIHAFAN’NY KOLONTSAINA, NY
FIFANKAZAHOANA ARY NY FIFANAJANA
Firenena manana kolontsaina maro isan-karazany i
Madagasikara. Noho ny fihavian’ny mponina samihafa ao dia
ahitana lova sy harena ara-kolontsaina isan-karazany: ny
fomba amam-panao nentim-paharazana, ny mozika, ny dihy,
ny haisoratra, ny tao-trano, ny fitafy, ny taozavatra. Lafiny maro
amin’ny kolontsaintsika anefa no atahorana ho very noho ny
tsy fikajiana sy ny tsy fahampian’ny fanohanana azy ireny.
1. Hajaina sy tandrovina ny lova sarobidy sy ny kolontsaina
TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA
1. Manorina sy manatsara tranomboky ho an’ny daholobe.
Minisitry ny kolontsaina
2. Mamantatra, mikajy ary mampivoatra ny kolontsaina nentim-paharazana
3. Manao izay haha-maty hanina ny mpanakanto
4. Mamorona fihaonambe mba hifanakalozana ara-kolontsaina.
5. Mamorona loka nasionaly eo amin’ny sehatry ny mozika, ny dihy , ny haikanto ary ny haisoratra.
2. Avela tanteraka ny fanao ara-kolotsaina mifanohitra
3. Tohanana ny fiainana ara-kololontsain’ny mponina
amin’ny endriny rehetra.
Fanadihadiana momba ny kolontsaina eo anivon’ny firenena
4. Ampiroboroboina ny zavakanto sy ny fanehoana
Isan’ny kolontsaina sy harentsaina nentim-paharazana voakajy sy voaaro
Isan’ny loka nasionaly momba ny kolontsaina
1. Karohina ary apetraka anaty raki-tahiry ireo toerana sy
ireo harena ara-kolontsaina.
2. Tandrovina ny kolontsaina malagasy, ny nentimpaharazana, ny tantara ary ny fitenim-paritra.
3. Atsangana ny ivotoerana miahy ny kolontsaina.
4. Ampirisihina ny fifanakalozana, hanamora ny
fifampizarana ara-kolontsaina ary hanamafisana ny
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 4
FANAMBY 2 ›
MANAMAFY NY FIFAMPATOKISANA SY FANDRAISANA
ANJARA EO AMIN’NY FIARAHA-MONINA
1. Mamolavola fampianarana momba ny fiainam-pirenena ho an’ny vahoaka
sy mandrafitra Fifaneken’ny Vahoaka
2. Manangana sehatra ifanakalozan-kevitra sy handraisana anjara amin’ny
famolavolana paik’ady ho an’ny daholobe
Ivo-toerana momba ny fitarihana (NLIM)
3. Mampandray anjara ny mpianatra ambaratonga faharoa sy ambaratonga
ambony amin’ny asa ho an’ny fiarahamonina
4. Mampivoatra rafitra hampianarana sy handraisan’ny olom-pirenena andraikitra
1. Hisy ny fandraisana anjara mavitriky ny rehetra eo amin’ny
5. Mandrindra fiofanana momba ny fitarihana ho an’ny tompon’andraikitra ambony
2. Ny fiarahamonim-pirenena dia hazoto amin’ny asa arakoltora, sosialy ary politika.
6. Mamolavola sy mampihatra lahatr’asa ho fampandrosoana ny asa
Minisitry ny serasera
Ara-tantara, dia tsy nandray anjara mavitrika ny Malagasy
teo amin’ny fananganana fiaraha-monina, sy ny fandraisana
anjara amin’ny fiainam-pirenena. Nanomboka Tamin’ny
taona 2003 dia, niova izany noho ny fananganana ny faritra
22 sy ny fanapariahana ny asam-panjakana. Ankehitriny dia
malalaka sy tsy miankina ny fampahalalam-baovao. Kanefa
mbola maro ny asa tokony ho tontosaina mba hananganana
fifandraisana sy fifampatokisana eo amin’ny vahoaka sy ny
3. Hanana andraikitra manokana ny fampahalalam-baovao
1. Ampandraisina andraikitra marina ny mpiasam-bahoaka
ary hahena ny fanararaotana.
Fandraisan’ anjaran’ny olom-pirenena
2. Arindra ny tanjona sy ny asan’ny vondrona fiarahamonim-pirenena.
3. Atao ny fanadihadiana ka valiana ny filan’ny vahoaka.
4. Entanina ny fikambanana ara-pivavahana amin’ny
fampandrosoana sy ny fraisankina.
5. Tohizana tsara kokoa ny fanomezana andraikitra,
ny fahalalahana sy ny maha-matihanina ny asa
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 5
FANAMBY 3 ›
MAMPIROBOROBO NY MAHA-IZY AZY NY FIRENENA, NY
FIRAISAN-KINA ARY NY HAMBOM-POM-PIRENANA
Miray ny mponina eto Madagasikara noho ny teny ikambanana
sy noho ny maha-nosy azy.
Manankarena ara-tantara i Madagasikara. Mirehareha
amin’ny foko niaviany ary koa ny fireneny ny Malagasy. Saingy
indraindray mety miteraka tsy fifankahazoana sy fifanolanana
ny fahasamihafana ara-poko sy ara-pihaviana.
Hirehareha bebe kokoa amin’ny fireneny ny Malagasy. Ho
olom-pirenena miray sy tomponandraikitra amin’ny lafimpiainana ara-politika, ara- toekarena sy ara-tsosialy izy. Ho
raisina toy ny harena ny fahasamihafana eo amin’ny famahana
ny olana miseho eo amin’ ny firenena.
1. Atsaraina ireo hetsika nentim-paharazana mba
hampiroboroboana ny firaisankinam-pirenena.
2. Asiana hetsika vaovao hanamafy kokoa ny firaisan’ny
mponina rehetra eto Madagasikara.
3. Omena lanja ny soa toavina sy ny hetaheta iraisan’ny
4. Ankalazaina ireo olom-pirenana nahavita ezaka manokana
nitondra avo an’i Madagasikara.
1. Manome lanja ny lafim-piainana mampiavaka ny malagasy, ny zavakanto, ny kolontsaina
sy ny zava-bitany
2. Mampandroso ny fifaninanana ara-panatanjahan-tena eto an-toerana sy iraisam-pirenena
Minisitry ny Kolontsaina /
3. Mikarakara hetsika ampisongadinana ny soatoavin’ny firenena sy isan’ambaratongamparitra
Fantarina ny hetsika nentim-paharazana isam-paritra hatramin’ny
Isan’ ny atleta manana haavo (lenta) iraisam- pirenana
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 6
FANAMBY 4 ›
MANATSARA NY FANAMPIANA NY VAHOAKA TENA
MAHANTRA SY NY SAHIRANA
1. Ankatoarina sy atsangana ny rafitra misahana ny Fiahiana ny fiarahamonina
Minisitry ny Fiahiana
2. Tanterahina ny paik’ady nasionaly momba ny fitantanana ny fahasahiranana sy
3. Iantohana ny fiarovana ara-dalàna ny vondron’olona sahirana indrindra fa ny
vehivavy sy ny ankizy
Atao izay ahazoan’ny rehetra sakafo mahavelona, trano
ialofana sy ireo filàna fototra.
4. Omena kopian’ny sora-pahaterahana ny ankizy rehetra
5. Atao izay hahatafiditra ny vondron’olona sahirana amin’ireo foto-drafitrasa
6. Atao izay hahatafiditra ny vondron’olona tena sahirana ao anaty rafitra fampandrosoana
Tondro nomen’ny Firenena Mikambana mikasika ny fahosana
hanatrehana ny loza sy fasahiranana
Isanjaton’ny fianakaviana ahitana tondrom-pahantrana mihoatra ny telo
Taham-pidirana an-tsekoly eo amin’ny olona tena mahantra
Olona tena mahantra mahazo fitsaboana
Isan-jaton’ny tanora sy ny zaza tsy manana kopia nahaterahana
Nanomboka tamin’ny taona 2003, dia nampitomboina ny
fijerena ny sahirana : ny fizarana vary, ny fandaharan’asa
« Vary tambin’asa », ny fiantohana ara-tsosialy. Kanefa mbola
misy ireo tsy manan-kialofana sy ireo tsy afa-misitraka ireo
foto-drafitrasa ara-tsosialy fototra. Misy ihany koa ireo
mponina izay tsy voaaro araka ny tokony ho izy manoloana
ireo loza voajanahary.
1. Atsaraina ny fitantanana ny fiahiana ny fiarahamonina
indrindra ny fahazoan’ny sahirana fiahiana ara-tsosialy.
2. Atsaraina ny fiantraikan’ny fanampiana amin’ny fiainan’ny
3. Iantohana ny fisorohana sy ny fanalefahana ny
fiantraikan’ny ny loza voajanahary.
4. Iantoahana ny hananan’ny vondronolona sahirana rafitra
ara-dalana ary tsy misy fiangarana.
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 7
FANAMBY 5 ›
MAMPIROBOROBO NY MIRALENTA SY NY FIZAKAN-TENAN’NY VEHIVAVY
Mavitrika tokoa ny vehivavy malagasy eo amin’ny fiainampianakaviana. Any ivelan’ny fianakaviana koa anefa dia misy
ireo manana asa aman-draharaha sy andraikitra ambony. Na
eo aza izany dia mbola tsy dia hita firy ny fandraisany anjara
eny anivon’ny asam-panjakana sy ny sehatra tsy miankina.
Hampitomboina ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy eo amin’ny
famahana ny olana eo amin’ny fiarahamanonina, ny
fandraisana fanapahan-kevitra ary ny fitantanan-draharaha;
hatsaraina sy harovana ny zon’ny vehivavy.
1. Ampidirina ao anatin’ny politikam-pampandrosoana
rehetra ny miralenta.
2. Tohanana ny fidiran’ny vehivavy amin’ny tolotra
3. Ampitomboina ny isan’ny vehivavy mitana toerana ambony
amin’ny raharaham- panjakana.
4. Ahena ny fanararaotana ny vehivavy amin’ny endriny
rehetra: ara-nofo sy ara-tsaina.
5. Foanana ny fomba nentim-paharazana izay misy
fiantraikany ratsy ho an’ny vehivavy.
1. Manangana rafitra ao anatin’ny fitondram-panjakana mba hampivoarana ny vehivavy
Minisitra miahy ny Vehivavy
2. Ampitomboina ny fandraisan’ny vehivavy anjara eo amin’ny toekarena, sosialy ary ny
3. Mandray vehivavy maro hiasa eo anivon’ny raharaham-panjakana amin’ny
Minisitry ny asam-panjakana
Isan-jaton’ny vehivavy ao amin’ny Antenimiera
Isan’ny vehivavy ao anatin’ny Governemanta
Salanisan’ny vehivavy miasa amin’ny rafi-panjakana isan’ambaratonga : firenena,
faritra ( miainga amin’ny isa fototra 100)
Elanelan-karama eo amin’ny lahy sy vavy any amin’ny sehatra tsy miankina
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 1
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 2
TENY IFANOMEZANA 1
Hanana governemanta izay hitokisan’ny olompirenena Malagasy
sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena isika. Ny governemanta
sy ny mpiasam-bahoaka dia hanana fahamarinana, ary ho
matihanina tanteraka amin’ny fanatontosana ny asany.
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 3
MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 1 | FITANTANANA TOMPONANDRAIKITRA
MAMETRAKA FANDRIAMPAHALEMANA SAHAZA IZAY
MIARO NY OLONA SY NY FANANANA
1. Averina dinihina ny lalàna, ny fitsipika ary ny zotram-panatanterahana mba hampahomby
ny fandrindrana ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana
2. Apetraka sy atsaraina ireo dinam-paritra
3. Angonina ny ho enti-manana rehetra mba hisorohana sy hanenjehana ny asan-jiolahy
ary hiarovana ny faritra ara-toe-karena
4. Apetraka ireo fomba fiasa vaovao mangarahara hanatsarana ny asan’ny vondron-kerimpiarovana
5. Alamina ny sehatry ny fandraharahana ny omby mba hampihena ny kolikoly sy ny halatra
1. Madagasikara dia ho lasa firenena azo antoka sy mandry
6. Sakanana ny fanodikodinana sy ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena
3. Ho voafehy ny asan-jiolahy an-tanàn-dehibe.
Tahan’ ny heloka bevava (isaky ny mponina 1000)
1. Avaozina ny rafitra, ny fomba fiasa, ny fanofanana ary ny
fanapariahana ny mpitandro filaminana.
Isan’ny faritra mena /116 distrika
Tahan’ ny faridranomasina sy ny faritra ara-toekarena manokana voaara-maso
Firenena mandry fahalemana i Madagasikara nefa misy ihany
faritra izay ahitana asan-jiolahy. Napetraka tamin’ny taona
2003 ny « Drafitra Nasionaly momba ny Fisorohana sy ny
Famaizana ny Tsy Fanarahan-dalana » saingy tsy ampy ny ho
enti-manana ka ampahany amin’izany drafitra izany ihany
no notanterahina. Mbola betsaka ny fanodinkodinana ny
harem-pirenena toy vatosoa, volamena sy ireo hazo sarobidy
ary mbola miroborobo koa ny fambolena rongony any amin’ny
faritra sasany eto amin’ny nosy. Tamin’ny taona 2005 dia
nahatratra 5.700 ny dahalo voasambotra ary nitombo 15%
izany raha oharina tamin’ny taona teo aloha.
2. Ho voadio ireo faritra mena ary hisy fihenana lehibe ny
2. Ahitsy ny iraka ankinina amin’ny mpitandro filaminana sy
ny ho enti-manana mba hifanaraka amin’ny filan’ny
firenena sy ny faritra.
3. Amboarina ny rafitry ny vondron’ny mpitandro filaminana,
arindra ny asan’ireo vondron-kery sy ireo sivily.
4. Arahi-maso ny morontsiraka ary tohanana ny sampandraharahan’ny fadin-tseranana sy ny vondron-kerimpiarovana mba hifehezana ny sisin-tany.
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 4
MANAMAFY NY FANJAKANA TAN-DALÀNA
4. Atsaraina ny fomba fitazonana ireo voafonja.
Tamin’ny taona 2004 dia nisy fandaharanasa hanovana ny
firafitry ny fitsarana. Hatramin’izay dia manodidina ny 60.000
no isan’ireo raharaha momba ny adi-heloka izay nitohana no
voatsara. Nisy Mpitsara manokana napetraka mba
hanafainganana ny fikarakarana ireo raharaha adi-heloka
tsotra sy ara-barotra. Nakantoavina ny « Fehezandalàna
mikasika ny Fitondrantena » ary nofanina tamin’izany ireo
mpitsara rehetra. Mbola misy ihany anefa ireo rafitry ny
fitsarana izay misy kolikoly. Betsaka ireo lalàna sy fitsipika
no tsy mifanaraka intsony amin’ny zava-misy. Ankoatr’izany
dia feno mihoatra ny tokony ho izy ny fonja ary mbola betsaka
amin’ireo voafonja no tsy voatsara. Ny tsy fahampian-tsakafo
sy ny aretina ihany koa dia mbola mahazo laka any am-ponja.
Ireo rehetra ireo dia ilana fanovana.
5. Apetraka ny rafitra fanabeazana ho famerenan-jo.
1. Havaozina ny rafitry ny fitsarana mba hanjakan’ny rariny
sy ny hitsiny.
2. Hisy ny fitsarana managaraharahara, tsy mitanila ary
3. Hifanaraka amin’ny filan’ny fampandrosoana haingana sy
ny fifandraisana eo anivon’ny fiaraha-monina ny lalàna.
1. Amafisana ny sazy mifandray amin’ny resaka kolikoly
2. Tohizana ny fanavaozana ireo lalàna sy ny fanatsorana ny raharaham-pitsarana
3. Tohizana ny fandaharanasa hanafoanana ireo rahahara mitarazoka eo amin’ny fitsarana
4. Ahitsy ireo didy aman-dalàna misahana ny fandraharahana ara-toekarena
5. Amafisina ny fiarovana ny zon’olombelona
6. Ezahina ny hitsarana ireo voatazona am-ponja rehetra
7. Ampitomboina ny famatsiam-bola mba hanatsarana ny fahasalamana sy ny fahadiovana
ary ny sakafo any anaty fonja
8. Apetraka ny rafitra fanabeazana sy famerenan-jo ho an ireo tsy ampy taona nahavita
4. Hajaina ny Zon’olombelona.
5. Ho voatsara avokoa ireo olona voafonja.
6. Hifanaraka amin’ny fenitra iraisampirenena ny fomba
fitazonana ny voafonja.
Maridrefin’ny Banky Iraisam-pirenena momba ny fanjakana tan-dalàna (/100)
Anjara tetibolan’ny fitsarana isan-taona mitaha amin’ny tetibola ankapobeny (/100)
Tahan’ny voafonja voatsara miohatra amin’ny voafonja miandry fitsarana
Tomban’ny fomba fiainana any am-ponja (Vokovoko Mena Iraisampirenena)
Fahafaham-pon’ny olona momba ny rafi-pitsarana
1. Apetraka ny fahatokisana sy ny fahaleovantenan’ny mpitsara.
2. Ampitomboina ny fangaraharahana sy ny fanekena ny
maha-tompon’andraikitra ary ny fahatomombananan’ ny
asa eo amin’ny rafitry ny fitsarana.
3. Avahana ny raharaha mafonja sy madinika ary atsaraina
ireo fomba fandraharana izany.
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 5
MAMPIHENA NY KOLIKOLY
Natsangana tamin’ny taona 2003 ny Filankevitra Ambony
momba ny Ady amin’ny Kolikoly izay lasa ho Komity ho an’ny
Fitandroana ny Fahamarinana sy ny Birao Mahaleo Tena
Miady amin’ny Kolikoly. Nananteraka ny asa nankinina taminy
tokoa izy ireo. Nakantoavina ny fehezan-dalàna miady amin’ny
kolikoly ary nihatsara ny tondro fandrefesana ny kolikoly. Na
izany aza mbola hita ihany ny fanaovana kolikoly amin’ny
Ahena ny fanaovana kolikoly amin’ny alalan’ny fanovana
ny soatoavina sy ny toe-tsaina, ny fampiharana ny
« Fehezandalana mikasika ny Fitondrantena ». Ampitomboina
ny fahatokisan’ny vahoaka sy ny mpandraharaha ny fitsarana,
ny asam-panjakana ary ny Mpitandro ny filaminana.
1. Amafisina ny fampiharan’ny mpiasam-pajakana ny Fitsipi-pitondrantena
2. Tsorina ny fombafomba arahina ary apetraka ny rafitra fanaraha-maso mahomby ho
an’ny sehatra saro-pady amin’ny asam-panjakana
3. Ankatoavina ireo lalàna vaovao manamafy ny fahefanan’ny sehatra mpanara-maso
tsy miankina ary arovana ireo mpitsikera ny tsy mety
4. Ampitomboina ny tetibolan’ireo andry sy sehatra miady amin’ny kolikoly
Minisitry ny Tetibola
5. Amafisina sy arahi-maso ny filazam-pananan’ireo tompon’andraikitra ambony
6. Ofanina ireo tompon’andraikitra hanatsarana ny asa sy ny fihazonana ny fahamarinana
1. Ovana ny soatoavina mba hitodika amin’ny
tombontsoan’ny daholobe sy ny firenena.
Tondro fandrefesana ny kolikoly (Transparency International )(/10)
Tahan’ny salan’ny vola lanian’ny tokantrano amin’ny kolikoly any amin’ny biraompanjakana (Loharano : Komity ho an’ny Fitandroana ny Fahamarinana)
2. Ahena ny fomba fanao manome vahana ny kolikoly.
3. Ampiharina ny sazy henjana ho an’ireo mpanao kolikoly.
4. Entanina ny fahatsiarovan-tenan’ny tsirairay mikasika
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 6
MAMETRAKA FOMBA FANATANTERAHANA MAHOMBY
1. Vitaina ny fanavaozana ny fitantanam-bolam-panjakana
2. Atsaraina ny fomba fizotran’ny ny fidiram-bola, ny fandaniana ary ny fanaraha-maso
3. Arindra ny politika sy ny lalàna mikasika ny hetra
4. Atsaraina ny rafitry ny fanangonan-ketra
5. Apetraka ny Tahirim-bola Lova (Trust Fund) hampaharitra ny vola miditra avy amin’ny
fitrandrahana ny harem-pirenena
1. Ireo didy aman-dalàna sy ireo fombafomba ara-panjakana
mikasika ny hetra sy haban-tseranana dia hahazoana vola
miditra ampy tsara.
6. Aseho amin’ny tranokalam-pifandraisana ny mombamomba ny fitantanam-bolampanjakana
Fiadidiana ny Repoblika sy
7. Ampiharina ny Fitsipika momba ny tolo-baro-panjakana
Sampandraharahan’ ny Tolobaro-panjakana
1. Ampiharina ny didy aman-dalàna mikasika ny hetra sy ny
Tondron’ny “Fandaniana volam-panjakana sy Fanekena ny maha-tompon’andraikitra”
Fandaniana ny anjara-tetibola atokana ho amin’ny asa sosialy
Notsorina sy narindra ny fomba fandinihana ny tetibolampanjakana tamin’ity taona 2006 ity. Noraisina ireo fepetra
hampiakatra ny vola miditra azo avy amin’ny hetra sy ny
haban-tseranana. Nanampy ny firenana malagasy ireo
mpamatsy vola indrindra tamin’ny fanafoanana ireo trosa.
Na izany aza dia mbola tsy ampy ny vola miditra amin’ny
fanjakana. Ankoatr’izany, tsy nahafa-po ny fizarana ny vola
holaniana, ny fombafomba ara-panjakana ary ny fanarahamaso ny fandaniam-bola.
2. Ny fandaminana ny vola holaniana dia hiankina amin’ny
fifanarahan’ny isan’ambaratonga sy ny filan’izy ireo avy.
3. Ny famolavolana sy ny fandaniana ny tetibola dia hanaraka
ny fitsipiky ny fanjakana tsara tantana.
2. Atsaraina ny fangaraharana sy ny fanaraha-maso ny volampanjakana.
3. Ampitomboina araka izay azo atao ny vola miditra.
4. Ahena ny fandaniana tsy mifanaraka amin’ny tanjona.
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 7
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 8
MANATSARA NY ASAM- PANJAKANA
1. Mametraka fomba fankasitrahana miainga amin’ny fahatsaran’ny asa vita
sy ny fahavitrihana
2. Manatsotra ny fandraharahana izay mitaky vokatra haingana
3. Mametraka ny fanovàna mifandray amin’ny fampiasana solosaina sy serasera
Fiadidiana ny Repoblika sy “Primature”
4. Manamafy ny fahaiza-mitarika
5. Manarina ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-mitantana ananan’ny mpiasambahoaka rehetra
Havaozina tanteraka ny sehatry ny asam-panjakana mba
Maridrefin’ny Banky Iraisam-Pirenena momba ny asa atao ho an’ny vahoaka
Faharetan’ny fandraharahana (fototra = 100)
Maro ireo fanovàna natao tany amin’ny sehatra toy ny ladoany,
asam-panjakana, toeram-pampiofanana. Natsangana ny
Fandaharanasan’ny Fanavaozana ny Fahatomombanan’ny
Asam-panjakana mba hanatsarana ny asa ho an’ny vahoaka
any amin’ny sehatra maro. Notsorina ny fomba fiasa mba
hanamaivana ny fikarakaraka antontan-taratasy. Natomboka
ny fampiasana ny teknolojia vaovaon’ny fifandraisana sy
serasera amin’ny fitantanana fanjakana. Na izany aza dia
mbola ilaina ny fanavaozana ny fitantanan-draharaha amin’ny
lafiny maro mba hampihenana ny fe-potoana, ny sarany, ary
mba hahamatihanina kokoa ny fomba fiasa.
Ny asam-panjakana dia ho matihanina sady za-draharaha
ary hamaly ny hetahetan’ny vahoaka.
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 9
FANAMBY 6 ›
MANAPARIAKA NY FITANTANANA NY ASAM-PANJAKANA
Ny fametrahana ny Faritra 22 tamin’ny taona 2004 dia nitarika
ny raharaham-panjakana hanakaiky kokoa ny vahoaka.
Nahazo fampiofanana sy fanohanana ny tomponandraikitry
ny fandraharahana sy ny fitantanana. Tsapa anefa fa mbola
mivangongo eo amin’ny Fanjakana Foibe ny fandraharahana
Hanana fahefana sy enti-manana araka ny tokony ho izy ny
kaominina sy ny Faritra mba hahafahana mamaly ny filàna
any ifotony sy any amin’ny faritra. Handray antanana ny
fandrafetana sy ny fampiharana ny drafitra fampandrosoana
ny faritra sy ny kaominina.
1. Hiainga amin’ny fanadihadiana tsara fototra momba ny
zava-misy, ny filàna ary ny tanjaky ny Faritra ny drafitra
1. Atsaraina ny didy aman-dalàna rehetra mba hanomezana fahefana sy andraikitra
bebe kokoa ny Kaominina sy ny Faritra
Minisitry ny Fanapariahampahefana
2. Ampiharina ny drafitra fampandrosoana ny faritra hifanojo amin’ny filan’ny mponina
sy ny tanjaka
Minisitra mandraikitra ny Fanajariana
3. Ampiharina ny lalàna momba ny fitsinjarana ny hetra voaangona
4. Ampivelarina sy ampiroboroboina ny Tahirimbola Fampandrosoana Ifotony (Fonds
de Développement Local)
5. Atsangana ny sehatra ifanakalozan-kevitry ny mpandray anjara lehibe amin’ny
fampandrosoana ny faritra
6. Amafisina ny fanaraha-maso demokratika ny tompon’andraikitra
2. Amafisina ny fahaiza-manaon’ny Faritra sy ny kaominina.
3. Hamafisina amin’ny lalàna ny toeran’ny faritra eo amin’ny
fanapahan-kevitra sy fanatanterahana.
Tahan’ny fampiasam-bola any amin’ny kaominina ao anatin’ny tetibolampanjakana ankapobeny
Tahan’ny hetra voaray any ifotony (miainga amin’ny 100)
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 10
FANAMBY 7 ›
MANJARY FIRENENA MAHAY MIVOATRA ARA-PAHALALANA
1. Mamantatra ireo fomba fiasa mahomby teto Madagasikara ary mampandroso sy
mampivoatra ireo anton-javatra nahitana voka-tsoa
2. Mamantatra sy mianatra ireo fomba fiasa mahomby avy eto an-toerana sy avy any ivelany
Fiadidiana ny Repoblika sy ny
3. Mamporisika ny olona handray sy hampihatra ny soatoavina momba ny fanandramana,
ny fanaovana vy very ny aina (prise de risque) ary ny fomba fiasa amin’ny fahaizana
4. Miara-miasa amin’ny famolavolana politika
5. Mampandroso ny fivoarana ara-pahalalana sy ny fandraisana anjaran’ny tanora
sy Minisitry ny Tanora
6. Mamporisika sy mampandroso fomba fiasa momba ny fahaizana mivoatra ara-pahalalana
2. Miara-miasa amin’ny any ivelany mba handinika sy
hampihatra ny fahaiza-manao mahomby mety mahasoa
3. Mametraka fomba fanabeazana ny olom-pirenena.
Maridrefin’ny Fivoarana Ara-pahalalana eo amin’izao tontolo izao
Madagasikara dia nandalo am-polo taona maro teo ambany
vahohon’ny fanjanahantany sy ny sosialisma. Hatramin’ny
taona 2002 dia nivoha malalaka ho amin’izao tontolo izao ny
firenena Malagasy. Na dia izany aza, noho ireo toe-java-misy
entin’ny fanontoloana, izay mety hampidi-doza na mety hiteraboka-tsoa ho an’ny firenena, dia ilaina ny hisian’ny olona
maro hahay hivoatra ara-pahalalana mba hahatonga an’i
Madagasikara hahay miatrika am-pahombiazana ny ady ho
Madagasikara dia ho lasa firenena mahay mivoatra arapahalalana. Ny fahalalana sy ny fahaizana dia horantovina
eto an-toerana sy any ivelany.
1. Mamorona tambanjotran’ny fivoarana ara-pahalalana
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 1
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 2
TENY IFANOMEZANA 2
Ho firenena mifandray isika. Hanorina làlana manana kalitao
avo sy rafitra momba ny hairahan’ny fifandraisana manerana ny
firenena isika mba hahatomombana ny fampandrosoana haingana,
ny fanamoràna ny sehatry ny fandraharahana sy ny varotra, ny
serasera eo amin’ny tompontany sy ny vahiny ary mba hanatsaràna
ny fari-piainana, ny fahazoana ny ho enti-manana ary ny fahalalana
ankapobeny ho an’ny rehetra.
MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 2 | FOTODRAFITRASA MIFANDRAY
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 3
MAMPIVOATRA NY FOTODRAFITRASA FAMPANDROSOANA
Ny fanamboarana sy fikarakarana lalana no vaindohandraharaha nanomboka tamin’ny taona 2002. Tamin’ny taona
2005 dia lalana 8.982 km no voamboatra sy voakarakara. Nisy
fandrosoana koa teo amin’ny lalamby sy seranantsambo ary
seranam-piaramanidina. Izao, dia tsy maintsy atao ny drafitra
paikady lavitra ezaka hananganana fotodrafitrasa mifandray
amin’ny faritra heverina fa hisy fandrosoana ara-toekarena.
Tsy tokony ho ny fanaovana làlana vaovao ihany no imasoana
fa ny fikojakojana ny efa misy koa. Araka ny fandinihana
natao dia hitombo 20% ny fifanakalozana ara-barotra
manerana an’i Madagasikara raha voakarakara araka ny
tokony ho izy ny fotodrafitrasa.
1. Miantoka fa hisokatra tsara amin’ny tambazotrampitanterana ny faritra manana otrikarena maro.
2. Faritana mazava ny laharam-pahamehana hananganana
fotodrafitrasa arakaraky ny vokatra ara-toe-karena amin’ny
3. Manampy haingana ny indostria tena mandroso, mba
hahazo izay fotodrafitrasa ilainy izy ireny.
4. Ampandraisina anjara toy ny mpiara miombona antoka ny
sehatra tsy miankina, amin’izay teti-pivoarana sy
5. Hatsaraina ny fahafahana sy ny fahaiza-manaon’ny
mpandraharaha amin’ny asa vaventy.
6. Amporisihina ny fiaraha-miasan’ny sehatra tsy miankina
sy ny fanjakana.
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 4
1. Manoritra sy mampihatra tetim-pivoaranan’ ny fotodrafitrasa
Minisitry ny Fitaterana sy ny
2. Manatsara ny seranan-tsambo, anisan’izany ny fanitarana goavana ny seranan-tsambon’i
Toamasina mba hahafahan’ny sambo vaventy miantsona
3. Manangana Filankevi-Pirenena momba ny Fitaterana izay misy ny sehatra tsy miankina
4. Manangana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena iray vaovao manara-penitra ary
mampiroborobo ireo seranam-piaramanidina any amin’ny faritra hafa
5. Mamita ny fanarenana ny lalamby Zotra Atsimo (Fianarantsoa-Manakara) sy Zotra Avaratra
6. Manangana tambazotram-pitaterana vaovao mampitohy ireo faritra be otrikarena
7. Manangana sampan-draharaha vaovao ao amin’ny Ministeran’ny fitaterana hiandraikitra
manokana ny fampiasam-bola lehibe (miara-miasa amin’ny EDBM)
1. Soritina sy ampiharina ny teti-pivoaran’ny fotodrafitrasa.
2. Mampivoatra sy manatsara ny fifandraisan’ny sehampitaterana manodidina ny faritra misy fandrosoana aratoekarena.
3. Atao lohalaharana ny fampivoarana ny fitaterana sy ny
tambazotran’ny làlana mifandray amin’ny sehampamokarana antoky ny fampandrosoana ny toekarena toy
ny fizahantany, ny angovo ary ny fambolena.
4. Havaozina ny Ministera misahana ny fitaterana mba
hanamora ny fampiasam-bola sy ny fandrosoan’ny
5. Miantoka fa ny laharam-pahamehana amin’ny famatsiambola dia taratry ny fahombiazana ara-toekarena hiterabokatsoa ho an’ny firenena.
6. Mampitombo ny fahafaha-manangana fotodrafitrasa
amin’ny fisintonana orinasa vaventy vahiny.
Taham-pitomboan’ny sehatry ny fotodrafitrasa
Saran’ny fandraharahana an-tseranana (sambo, fiaramanidina)
Ny fahafaha-manaon’ny seranan-tsambo sy ny seranam-piaramanidina
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 5
Ambatolampy Anosibe An’Ala
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 6
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 7
MITATITRA OLONA SY ENTANA AMIN’NY FOMBA MAHOMBY
Tsara tokoa ny fivoaran’ny tambazotram-pitaterana eto
Madagasikara tato anatin’ny taona vitsivitsy izao. Ary izany
dia niompana indrindra amin’ny fanamboarana ny làlana
any ambanivohitra sy ny lalam-be. Kanefa tsy maintsy
aompana bebe kokoa amin’ny fampivoarana ny tambazotrampitaterana ny teti-pivoarana manomboka izao. Be no mbola
tokony hatao mba hahatonga ny fitaterana rehetra ho tafiditra
ao anatin’ny rafitra nasionaly ary mba hanatsarana ny
fotodrafitrasa hifandraisan’ny seha-pitaterana samihafa.
1. Manova ny fomba fampitohizana ny famatsiana mahazatra
mankany amin’ny fomba fampitaovana mahafehy tsara ny
5. Mitady vahaolana hanatsarana ny fiantraikan’ny fitaterana
eo amin’ny toe-karena sy ny tontolo iainana.
1. Hisy kolontsaina momba ny fitantanana ny fampitohizana
ny famatsiana manerana ny indostria mampiasa ireo
2. Hisy koa tontolo anjakan’ny fifaninanana mavitrika eo
amin’ny samy tao-raharaham-pitaterana.
3. Hanao fitanterana mahomby ny entana sy ny olona isika
fa tsy fotodrafitrasa fotsiny.
4. Hanana rafitra fitaterana maharitra, izay hanome lanja ny
fiantraikany eo amin’ny fiarahamonina sy tontolo iainana
ary toekarena isika.
2. Mampitombo ny fifaninana mba hametrahana fitaterana
3. Mampivoatra ny laza tsara mikasika ny fahatokisana sy ny
4. Mamaha ny olan’ny fanampiana ara-bola tsy mahomby.
6. Manamora teti-pitondrana mivelatra “Lanitra Misokatra”
na “Open Skies” izay mampitombo ny isan’ny toerana
7. Manangana rafi-panofanana momba ny fitantanana tetikasa,
ny fitantanana ny fampitohizana ny famatsiana sy ny
fampitaovana ary ny fanamboarana sy fampiasana
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 8
1. Mamita ny lalana mandrafitra ny rafitra lalambempirenena ka ahitana:
• Lalana Toamasina - Maroantsetra
• Lalana Diego - Antananarivo
• Lalana Fianaranatsoa - Fort Dauphin
• Lalana Ihosy - Fort Dauphin
• Lalana Antsiranana - Fort Dauphin
• Lalana Morondava - Antananarivo
Halavan’ny lalana nasionaly noforonina sy namboarina
Halavan’ny lalana ambanivohitra noforonina sy
Halavan’ny lalana nasionaly voakojakoja ara-potoana
Halavan’ny lalana ambanivohitra na vita amin’ny
vatokely voakojakoja ara-potoana
2. Manamboatra ny lakandranon’i Pangalana mba
hampandroso ny varotra sy fitaterana
Mpandeha : 40%
Varotra : 55%
Mpandeha : 70%
Varotra : 80%
3. Mamerina mandinika ny fanampiana ara-bola sy ny
Taha-pahafaham-pon’ny mpanjifa momba ny
hatsaran’ny taoraharaha isaky ny karazam-pitaterana
(fiadanan’ny mpandeha, arovoina, fotoana, fisiana tsy
tapaka oharina amin’ny vidy)
4. Foanana ny sakantsakana tsy ahatanterahana ny tetipitondrana “Lanitra Misokatra”
5. Hatsaraina ny fotodrafitrasa marolafy
6. Hatsaraina ny arovoina amin’ny alalan’ny fanabeazana
sy ny fampiharana ny Fandaharanasam-pirenena ho
amin’ny Arovoina sy Fitaterana
Madagascar_PRSP_Malagasy.pdf (PDF, 5.5 Mo)
fomba panjakana fampandrosoana madagasikara firenena isika minisitry voajanahary perinasa pirenena izany momba taona rehetra ifanomezana
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00102419.